Ummeli ogwetshiwe uGökmen Tanis wabanjwa, mhlawumbi umdlalo weentsapho: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Matshi 2019	• 36 Comments
Ngoko unayo yonke indlela, unayo iikhamera ezixhomekeke kuwo wonke umzi, wonke umntu unokunyuka ngokuzenzekelayo, uneenkqubo ezinkulu zokuhlalutya kwedatha, kodwa awukwazi ukubona ukuhlaselwa okwenzeka ngethuba ngosuku lwesiteleka sothutho loluntu? Emva koko uvuthela ibali elipheleleyo kumaphephandaba kwizenzo zesiganeko kwaye ngokukhawuleza imiyalezo iyavela ukuba ingaba malunga nokuhlaliswa kwezigaba ezihlobene. Iingxelo ze-NOS [catshulwa] Ngexesha lemihla, izitatimende zenziwe ngabantu abazaziyo, bethetha ukuba unengxaki yengqondo kwaye kwakukho umcimbi weentsapho. Ngokweminye, ummangali wayelindele ukuphuma kwakhe, abanye bacinga ukuba injongo yakhe yayiyilungu lomyeni wakhe.
Ngokombono wam, sele sifanele sibhekane ne-PsyOp elungiselelwe kakuhle ukuvavanya onke amanyathelo obundlobongela kwaye bakwazi ukulinganisa impendulo yabantu. Sibonile umkhosi wamapolisa kwisitalato onokuyithatha ilizwe lonke! Ukongezelela, kwakuyindlela enhle yokuzisa into entsha, oko kukungeniswa kokungcebeleka kweendaba zoluntu. Oku kungafumaneka kwinto yokuba amapolisa athi imifanekiso ayifanele ilayishwe kumajelo aseburhulumenteni, kodwa kuphela kwiwebhusayithi yazo. Ukuqaliswa kwehlabathi lonke kwenene kwenzeka ngexesha lokuhlaselwa eNew Zealand, njengoko kuchazwe kuyo eli nqaku. Iwebhusayithi yaziswa kwakhona apho ungabika ukuba ukhuselekile (ikbenveilig.nl enhle kwiinkqubo ezinkulu zeenkcukacha). Okwangoku, umphumo weendlela ezahlukeneyo zokusongela inokulinganiswa kakuhle. Ngale ndlela abantu bangasetyenziselwa ngokukhawuleza ukuba 'imeko yokungqingwa' kwaye kunokwenzeka ukulinganisa indlela abemi abalungileyo ngayo kuhlala ngaphakathi kwikhowudi ye5.
Amapolisa abizwa ukuba ahlola kwindawo yommangali ngomdaka. Kwakhona kunjalo ukufika kwesilwanyana esitsha esinokuyisebenzisa. Abantu babekwazi ukuzonwabisa nemifanekiso yamagosa ahlomile kakhulu kwaye ngoko onke amapolisa aseburhulumenteni amanyathelo ngosuku lwe-1 bavavanywa kakuhle. Sinokulindela nini ukufakwa kwamathangi esitalato? Hayi, kuba sifuna ngaphezulu (ukukhohlakala) ukwesabisa, kunye nezixhobo ezinzima nakakhulu!
Leli gama liza kuba likhawuleza lihlaselwe kwidrama yentsapho. Okwangoku, zonke iisistim ziye zavavanywa ngokupheleleyo kwi-1 imini kwaye abafazi neentloko basuke behamba nesizathu sokuba kukho izigodo eziphezulu. Unokwazi nje ukubiza "ingcali yobugrogasi" ukuba ubavumele ukuba umntu angabandakanyi omnye kwaye i-jihadists inokubakho ukwesabisa ngenxa yokusetyenziswa kweziyobisi okanye iingxaki kwizigaba zobudlelwane. Intombazana enje into eyenzayo iindaba zeNOS Unokuza ukufumana amava akhe entsimini. Kwaye ke wonke umntu wenza ipee kwaye yonke into iqhutywe phambili.
UGeenstijl wakwazi ukubika ukuba iGökmen Tanis inokuba nguMarcus le movie ukwenza kube lula. Ngubani owaziyo, kodwa ngubani na ondixelela ukuba ayengakwenzi? Kukho nawuphi na, akufanele ucinge ukuba urhulumente uphakamisa izinto ezinjalo. Oko akunakwenzeka; oko akunakwenzeka. Oko kukucingela i-conspiracy kwaye kufuneka kuvinjelwe.
Abafileyo kunye nabalimala bahlala beyinyani. Emva koko, sibona imifanekiso yinyani kunye namangqina okwenene kunye nezihlobo zangempela. Asikholelwa ukuba oorhulumente nabasemagunyeni benza into enjalo yokuzonwabisa. Hayi, ayenzi oko kukuzonwabisa; benza oku ukuze bakwazi ukuqhubeka nokuphunyezwa kwamapolisa karhulumente. Ngaba uyaqonda? "UEwe, kodwa awuyi kubuyisa abafileyo kunye nabalimala?"Ukuba unako ukuzisa abantu abangama-17 phantsi kobupolisa bobupolisa ngaphandle kokuvukela?" Kutheni na? Khangela ividyo engezantsi uze ucinge ngezinto ezinokwenzeka xa usebenza nabalingisi, fakes en ubugcisa bokusesikrini. Ukuba udibanisa oko kunye nokugqithiswa kweendaba kunye nokuphinda kwamanga, bonke abantu baya kukholelwa ngokuzenzekelayo (i-copyright i-Joseph Goebbels).
Ngaba kwakungekho okhethekileyo ukubona ukuba iikhamera zeendaba ziyakulandela njani yonke into? Kwakubonakala ngathi babesazi kakuhle ukuba bekufuneka bani. O kuhle. Ukulala kakuhle. Amehlo avaliwe kwaye iminyango ivaliwe. UYise uyakulindela kakuhle.
Musa ukulibala izimvo phantsi kweli nqaku kunye nalo nqaku yangaphambili u kufunda. Noko ke qhubeka uvota! Funda apha kutheni!
Uludwe lwekhonkco lovimba: nos.nl, telegraaf.nl
tags: 24 oktoberplein, babanjwe, kubanjwa, kubanjwa, umdlalo weentsapho, eziziimbalasane, babanjwe, Gökmen Tanis, jihadist, jihadists, Utrecht
URowald Krijthe wabhala wathi:
18 Matshi 2019 kwi-21: 00
Futhi ov 66 imizuzu ......
18 Matshi 2019 kwi-21: 27
Ubungqina bukaDaniel Molenaar, oboniswe yi-NOS, uye wenza uvavanyo olunomdla:
18 Matshi 2019 kwi-21: 35
IYunivesithi yase-Utrecht idlala indima ebalulekileyo kule psyop, ndiyazi ukwazi ngobuxoki bukaDe Graaf vnv kwiprogram yokubona abantwana bebhubhu. UPaw noJenek bangena
18 Matshi 2019 kwi-21: 43
U-Beatrice de Graaf ke ngoko uphando kwiindaba ze-GDR. Ngoko uyazi kakhulu nge-Inoffizieller Mitarbeiter kwinkqubo kwi-GDR. Ngenxa yoko uMary uye waqeqesha lo mboniso uDaniel miller!
Kwi-2004 wathola i-PhD yakhe kwiYunivesithi yaseUtrecht kunye nokuchazwa malunga ne-GDR
18 Matshi 2019 kwi-21: 50
Ngokuqinisekileyo uyilungu leKlabhu ngaphandle koko awuyi kufumana loo ndawo. Ewe, yindlela esebenza ngayo kwiindawo ezisolwandle eziqhelekileyo, ezilawulwa ngabantu abanobutshaba bantu abaqhelekileyo. Abantu bengozi. Kwaye ngokukhawuleza ukhululekile kwaye ulawulwa.
18 Matshi 2019 kwi-21: 56
Kukho oku ... ukongeza konke kunye. Yaye ubone ngubani owenza ingxelo kwi-AD yonke i-AIVD ne-MIVD
Iingqungquthela zobuqili / iinkalo ezijoliswe kuyo
Iziko zeMibutho evulekileyo (umxholo osisiseko)
nembali yobudlelwane bamazwe ngamazwe
ugonyamelo kunye nodlova kwezopolitiko
Iiprojekthi zophando (ukhetho)
TerInfo. Ukwenza ugubungqungquthela buxubushe eklasini (2017-)
Ukulondoloza iYurophu, ukulwa neentshaba. Ukwenziwa kwenkcubeko yokhuseleko eYurophu nangaphezulu (ERC Consolidator Grant, 2014-2019)
Iimpawu zeThemba (NWO Ukhuphiswano lwe-Free, 2016-2021)
Iintshaba zeSizwe. Ukwenziwa koRhulumente weSizwe woKhuseleko, i-1945-2000 (NWO VIDI, 2009-2014)
Izigqeba zovavanyo (iqela lophando lwe-NIAS, i-2010-2011)
18 Matshi 2019 kwi-22: 29
Kuyinto enomdla kukuba "ugqirha lobuchwephesha" ukusuka kwi-20: I-00 ngeyure iindaba ze-NOS (10: 06 min.) Uthiwa nguJeanine de Roy van Zuijdewijn. Sonke sibona amagama angama-elite ...
Ngokuqinisekileyo udade kaEdwin de Roy van Zuijdewijn?
18 Matshi 2019 kwi-22: 38
Yiloo nto endiyicinga njengokuphefumlelwa kokuqala
18 Matshi 2019 kwi-22: 52
Iqela elincinci elingaphantsi kwesininzi, iMinerva, i-Instituut Clingendael (uxhumano lwe-baudet nge-Cliter) njl.
18 Matshi 2019 kwi-21: 46
Eneneni imfundo enhle kwiintlola ezizayo, i-trolls kunye ne-spooks. Lo miller ukhangeleka kakuhle kwaye akanakukhathazeka. Iipakisha abantu ngokucokisekileyo. Iimpawu ezifanelekileyo zokuhlola. Thumela kwiNyakatho yeKorea ngokutshintshiselwa kwamasiko, okanye
inkqubo yokuhamba isebenza kakuhle, okuthiwa 'ukuhamba'.
18 Matshi 2019 kwi-21: 33
Yaye oko kuya kuchazwa njani?
18 Matshi 2019 kwi-21: 52
Iphuso lokubulela! Bathi ngoko okanye ubuhlungu buya kwenza kakuhle.
18 Matshi 2019 kwi-21: 18
"Emva kokudubula e-Utrecht, abantu bangabika kwi-Facebook ukuba baphephile. Inkonzo ivule into ebizwa ngokuba yi-Safety Check. Yonakuqala ngqa eNetherlands ukuba oku kwenzekile ngenxa yesiganeko eNetherlands.
Ukuba kwenzeka inhlekelele, i-Facebook inokugqiba ukuthumela umyalezo okhethekileyo kunoma ubani onokuthi abe kwindawo yentlekele. Abasebenzisi banokuklikha kwiqhosha elithi 'Ndikhuselekile'. Isaziso sizithunyelwa ngokuzenzekelayo kubo bonke abahlobo babo babasebenzisi.
I-Facebook Safety Check yayisetyenziswe ngaphambili ekubulaweni kweLondon, eManchester, eBrussels, eBerlin, eParis, eMunich, eNigeria, eTurkey naseLas Vegas kunye neentlekele zemvelo ezifana nemililo yomlilo, iindwangu kunye neenyikima. "
Ngamafutshane: thembela iinkqubo ezinkulu zeenkcukacha kwaye uthembele kwilizwe: ingxelo ngokukhawuleza kubaba okhuselekileyo. Ewe, yonke le data ayisebenzisi nantoni na enye. Ku lungele.
Ndimele ndithethe ngokunyanisekileyo ukuba andiqondi ukuba umntu ufuna ukuba yipolisa, ijoni, njl njl. Ingaba azinakho ukuzimela, ukucinga ukuhlambulula amandla? Abacingi ukuba badlala kwi-madhouse kwaye ukuba abaphathi babo basuke bangenangqondo. Hayi, ngokwenene abanaloo mandla. Ku malunga nokudlala iphoyisa, ijoni njl Banyamekela i-uniform kwaye abakhathaleli ukuba yiMiqathango abayigcina ngayo. Uxolo uMartin kwigrama yegama.
Abasebenzi bakarhulumente bakho besazifani neyifom yakho. Ngethamsanqa kodwa ngenye indlela awuyi kucinga nantoni ngaphandle kweyunifomu. Asinakukwazi ukuba kunjalo. Siyabonga ngokugcina iMadurodam iphephile.
18 Matshi 2019 kwi-21: 37
Kwimeko nayiphi na into, ngoku baye bakwazi ukuqhuba umsebenzi owenzayo ... we8 kunye ne-9 kaNovemba yayingumquba
18 Matshi 2019 kwi-22: 10
Kwakhona kwiVervoersmaatschappy Kreolis kwaziwa ukuba kwakuza kwenzeka ntoni namhlanje. Kususela ngoku ihlanjululwe nguKreopolis
Ngelishwa andinakufumana ifoto ithunyelwe apha.
Ihlala ikhona kwi-Martin Vrijland
18 Matshi 2019 kwi-22: 13
I-salmon yamathanga, intatheli eNetherlands ngokuqinisekileyo abahleli abaziintloko basebenze ngokuthe ngqo kwaye phantsi kolawulo lweenkonzo zokhuseleko. Ba nombolo yabucala yomnye nomnye kwaye ngamalungu eKlabhu, kunjalo.
Oku kusebenza nakubalobi abaninzi 'abadumileyo.' Ukubhala kuyisikhuselo. Abantu abahle, abafihlakeleyo.
18 Matshi 2019 kwi-22: 57
Awekho iipops ezitratweni. Ukungcola, ukungazinzi, njl.
Kubonakala ukuba imali iya kulezi ntlobo zeeyunithi.
@ zon ... siphantse sonke sidlala. Sonke siyigcina.
18 Matshi 2019 kwi-23: 35
U-Ah Nieuwsuur uxela ukuba inqaku lafunyanwa kwakhona kwi-red renault. Ngoko akukho pasipoti ngeli xesha, kodwa inqaku.
Yintoni ebengayibhala? Uluhlobo lwencwadi yokuyeka?
Umboniso kufuneka uqhubeke!
18 Matshi 2019 kwi-23: 45
O kuhle ukuba uDavan unjalo, 'ngenhlanhla iingcango zivulwe' kubonakala ngathi iingcango zivulekile oko kukuthi .. qhubeka ndikumangalisa apho bazi khona ukuba zifumanephi ezo zixhobo ezinobulumko kwaye kubonakala ukuba zizele ... intsha encinane ibhaliwe kwi nl
18 Matshi 2019 kwi-23: 48
Kwaye omnye umntu? "Ewe, wavele ephefumula"
Ngaba ufunda ukupholisa kakhulu kwiziko le-AIVD?
I-11: Ubungqina bemizuzu eyi-25 uNicky van Grinsven
18 Matshi 2019 kwi-23: 57
19 Matshi 2019 kwi-11: 38
Le nsizwa inkulu kakhulu. Ndicinga ukuba bambalwa bebeya kuba yimeko yakhe.
19 Matshi 2019 kwi-10: 27
19 Matshi 2019 kwi-10: 47
I-jaja de emo ukuhlawulela ngoku iya kwi-overdrive ukuze ibali liqiniseke. Yimidiya, ngoko-ke amajelo angayifaka kwaye angabonisa imifanekiso yezihlobo kwaye angakha kwaye agcine ibali lonke.
19 Matshi 2019 kwi-11: 03
Ndingumbuzo we-1 kuwe uMartin,
Yintoni eyenzekayo kubantu abachaphazelekayo njengomqeqeshi webhola?
Ngenxa yokuba kufuneka aqeqeshe apho kwaye abantu bafanele bamazi, ndicinga.
Okanye ingumntu ongeyintsimi?
19 Matshi 2019 kwi-11: 18
Ingaba ngumntu wangempela (ithikithi enye eya kwiiIiikiki zaseWaikiki), kodwa kwakhona akunakwenzeka. Izihlobo kunye namangqina esiya kubona kwiTV ziboniswa kwiTV. Okanye: iindaba eziphambili zikhokela kwibali kwaye zingenza kwaye ziphule yonke into. Umkhosi weendaba zoluntu ulungele ukukhusela le nkundla.
19 Matshi 2019 kwi-11: 43
Kulungile kwaye uyabulela impendulo yakho.
19 Matshi 2019 kwi-11: 15
Ndiyazi kakhulu ngolu hlobo kunye nomsolwa (osengqondweni). Ingaba nguye umqhubi kwindawo ehleliwe kwangaphambili? Ukuba kunjalo, bamfumana njani? Ngaba wayeva amazwi entloko? Ucinga nje. Kwimeko nayiphi na imeko, nokuba yintoni na imeko kwimeko yokusebenza kwengqondo, wayengumntu otyunjweyo abayifunayo kulo "kuhlaselwa" ekugqibeleni ukugqitywa kwamapolisa ngokomthetho.
19 Matshi 2019 kwi-11: 36
Unokwenza abantu abadinga ngokukhawuleza iziyobisi okanye amayeza benza izinto eziphambeneyo.
Asazi ngokuqinisekileyo ukuba ngaba kunjalo.
19 Matshi 2019 kwi-12: 32
Kukho ubuchule obuphambili bokukholisa umntu ekude ukuba enze isenzo sabarhwebi, umzekelo. Kwaye bayazi ngokuqinisekileyo ukuba kuya kubangela isenzo esiya kubazuzisa. Ngokuqinisekileyo kukulungele ukuhlukumeza umntu ngengxaki yengqondo.
19 Matshi 2019 kwi-11: 42
Baya kukhwankqiswa njani?
19 Matshi 2019 kwi-11: 50
19 Matshi 2019 kwi-12: 15
Umbuzo wokuba ulwaphulo-mthetho lubandakanyeka okanye aluyi kuthintela nokuba ngaba izenzo zorhulumente, ukuboshwa kommangali, ubungqina, njl njl. Zenziwe ngokusemthethweni. Ummeli 'olungileyo' uya kukwazi ukuba, ukukhwehlela. Kwaye ke ukunyusa abantu. Khumbula ukuba kuya kubakho ukhetho ngomso. Ndiyazibuza ukuba ngaba kuya kuba neengcinga ezininzi, okanye ngokuchaseneyo?
19 Matshi 2019 kwi-12: 39
Thina i-Jihadists ifuna ukugwetywa phambi kweenkundla ze-Sharia!
KwiSilamsi, umthetho wobugebengu ukhululekileyo kwimvelo. U-Murder, umzekelo, uyahlwayelwa isigwebo sokufa, kodwa izalamane ezihlala zixhoba zenza isigqibo sokuba ngaba eso sihlwayo sinyanzeliswe okanye senziwe ngokusesikweni. Isixa saloo mali sisetyenziswe ngokuthintana phakathi kwamaqela. I-Blood feud okanye ukubulawa kozuko akuvumelekile.
Squenzy wabhala wathi:
19 Matshi 2019 kwi-13: 51
Into endibethele izolo ngokukodwa malunga neeholi le-6 kwiindaba ze-RTL kukuba kukho ingqalelo enkulu ehlawulwa kwi-mosque e-Utrecht. Oku kuya kuvalwa ngokukhawuleza xa kwaziswa ukuba ukuqhuma kuqhubekile. Udliwano-ndlebe nomphathi we-mosk blabla. Uthetha ukuthini isimo? Ukuphendula ngokucacileyo kwiingcinga zabemi ukwenzela ukuba zidibene kunye nokudubula eNew Zealand. Oku akunalo indawo efanayo, kodwa ke ke uzama ukuphendula iingqondo zabantu. Kutheni kufuneka uvale i-mosque kwakhona kuba kukho ukudubula kwindawo ethile kwisixeko? Ikhonkco isengqiqweni. Yeyiphi ihlabathi eligulayo.
« Ukuhlasela kobuphekula 24 Oktoberplein e-Utrecht, ukwethusa lonke ilizwe!
Abafileyo bokuhlaselwa e-Utrecht bafaka ubungqina bokuthi akunakuba yi-PsyOp? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.950.388